Kuusdeetaa dBASE dhaaf qindaa'inoota adda baasi.
Quunnamtiilee gabateewwan gidduutti uumuuf, LibreOffice irraa JDBC YKN ODBC fayyadami.
Galmeewwan ka'aa hin taane agarsiisa
Galmeewwan faayila keessa jiran agarsiisa, akka haqamaniif kan mallattoon itti godhame dabalatee. Yoo saanduqa filannoo kana filatte, galmeewwan haquu hin dandeessu.
Dhangii dBASE keessatti,galmeen haqame faayila keessatti hafa.
Jijjiirama kamiyyuu kuusdeetaa irratti adeemsistee mul'isuuf, walindhaa kuusdeetaa cufi, fi san booda kuusdeetaa walqabsiisi.
Qaaqa Kasaalee jedhu bana, iddoo ati kuusdeetaa dBASE ammaa kasaalee gabatee walitti qabuu dandeessa.